Wadanka IRAN oo laga qaaday Cunaqabateyntii Saarneyd | shumis.net
Home » News » Wadanka IRAN oo laga qaaday Cunaqabateyntii Saarneyd
Wadanka IRAN oo laga qaaday Cunaqabateyntii Saarneyd
Dalka Iran ayaa Sabtidii shalay si rasmi ah looga qaaday cunaqabateyntii saarneyd dalkaasi kadib markii ay kasoo baxday shuruudihii ku qornaa heshiiskii Xakameynta Barnaamijka Nukliyeerka ee wadankaasi.
Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Nukliyeerka ee (IAEA) ayaa xaqiijisay in dowlada Iran ay ka dhabeysay qodobadii ku qornaa heshiiskii bishii July ee sanadkii hore ay wadagaareen Iran iyo dowlada awooda kuleh Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Sabtidii shalay ayey magaalada Vienna ee dalka Austria ku kulmeen Xoghyaha Arrimaha Dibada Maraykanka John Kerry iyo Wasiirka Arrimaha Dibada ee IRAN Maxamed Javad Zarif, kuwaasi oo ku tilmaamay guul diblumaasiyadeed dhaqan-gelinta heshiiskaasi.
Madaxweynaha Iran Xassan Rowxaani oo maanta la hadlay Warbaahinta wadankaasi ayaa sheegay inay guul taariikhi ah u tahay wadanka Iran in laga qaado cunaqabateyntii saarneyd mudada dheer.
Heshiiska dhexmaray Iran iyo lixda dal oo kala ah Maraykanka, Ruushka, France, Germany, China iyo UK ayaa qorayey in hoos loo dhigo cadadka tamarta Nukliyeerka ee Iran si aan wax hub looga sameyn, isla markaana waxaa xakameyn la dul dhigay awooda barnaamijka Gantaalada ridada dheer ee qaadi kara bambaanada Nukliyeerka.
Dalka Iran ayaa dhankiisa loo balan qaaday in laga qaadi doono Cunaqabateynta caalamiga ee dhaqaale iyo militari ee saaran, sidoo kalena loo fasixi doono dhaqaalihii Iran dibada u yaalay ee laga xayiray, dhaqaalahaasi oo lagu qiyaasayo 150 bilyan oo dollar.
Qaar kamid ah dalalka Bariga dhexe ayaa si weyn uga soo horjeeday heshiiskan sida Dowlada Sucuudiga iyo Maamulka Isra’iil oo sheegay in ay khalad tahay in la qaado cunaqabateynta saaran dalkaasi, waxayna sidoo kale walaac ka muujiyeen in dhaqaalaha loo fasaxay Iran ay ku maalgelin doonto kooxaha Iran xiriirka laleh ee ka dagaalamaya guud ahaan bariga dhexe.
Title: Wadanka IRAN oo laga qaaday Cunaqabateyntii Saarneyd
Posted by galmada Net, Published at January 19, 2016 and have 0 comments